Macalinka Kooxda Manchester City Pep Guardiola Oo Sheegay Inuu Soo Dhaweenayo Caawinta Xulka Qaranka England Kahor Inta Aan La Gaadhin Koobka Aduunka 2018. – GOOL24.NET
Macalinka Kooxda Manchester City Pep Guardiola Oo Sheegay Inuu Soo Dhaweenayo Caawinta Xulka Qaranka England Kahor Inta Aan La Gaadhin Koobka Aduunka 2018.
Pep Guardiola ayaa sheegay inuu diyaar u yahay caawinta xulka qaranka England iyo macalinka leyliya ee Gareth Southgate sida uu kaga caawin lahaa diyaargarowga ay ugu jiraan koobka aduunka soo aadan sanada 2018 ka dhici doono dalka Russia, waa haddii ay doonayaan inay ka faa’ideystaan qaar ka mid ah waxyaabihii u suuragaliyay in Manchester City xilli ciyaareedkan ay guulal gaadho.
46 jirkan kooxda Manchester City ayaa wuxuu sheegay inuu ku faraxsanaan lahaa hadii ay dhacdo inuu la wadaago saraakiisha xulka qaranka England sirta ka dambeysa in Manchester City ay xili ciyaareedkan guulal muhiim ah gaadho, si kaliya uu u caawiyo xulka saddexda libaax kahor inta aan la gaadhin koobka aduunka soo aadan.
Guardiola ayaa wareysi uu siiyay wargeyska reer London ee “Evening Standard”: “Dabcan waan la hadli karaa, ma jiraan wax dhibaato ah ee aan ku qabi karo arintan”.
Macalinka reer Spain ayaa wuxuu hadalkiisa intaa sii raaciyay; “Waxa kaliya ee aan doonayo ayaa ah horumarka xul weyn sida England oo kale, waxaana muhiim ah inay sameeyaan sida ay ku qanci karaan”.
Si kastaba Manchester City uu hogaaminayo Pep Guardiola ayaa waxay bandhig cajiib ah ka sameenayaan horyaalka Premier League, wuxuuna kulanka caawa ay kooxdiisa la ciyaari doonto Crystal Palace uu sidoo kale fursad weyn u heli karaa inay gaadhaan guushoodii 19aad, si hogaanka ay ugu qabtaan 16 dhibcood nadiif ah.
Tababare Guardiola ayaa ku dhiirogeliyay ciyaartoyd dalka England ee ku sugan safka kooxda Sky Blues inay wanaa jiyaan bandhigyadooda sida Rahim Stirling, Fabian Delph iyo Kyle Walker.
Xulka qaranka England ayaa Group G ay kaga jiraan koobka aduunka soo aadan ka dhici doono dalka Russia sanada 2018 waxay kaga mideysan yihiin xulalka kale Belgium, Tunisia iyo Panama.